१५८० अंकमा झर्यो नेप्से,गुमाउनेमा को–को परे ? « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
१५८० अंकमा झर्यो नेप्से,गुमाउनेमा को–को परे ?
काठमाडौ । साताको अन्तिम कारोबार दिन सेयर बजार १८.३३ अंकले घटेर १५८०.०३ अंकमा कायम भएको छ । कारोबार भएका सबै समूहहरु ओरालो लागेका छन् । सबैभन्दा धेरै बीमा समूह १४७.१ अंकले घटेको छ ।
केही दिनदेखि लगातार बढेर झन्डै अर्ब पुग्न लागेको कारोबार विहीबार ओरालो लागेको छ । दिनभरिमा १६० वटा कम्पनीको १५ लाख ७२ हजार ३२ कित्ता सेयर १० हजार चार सय ५९ पटक खरिदविक्री हुँदा ८४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।
कुल कारोबारमध्ये, एनआईसी एसिया बैंकको छ करोड २६ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । आरएसडीसी लघुवित्त र छिमेक लघुवित्तको पौने चार करोडको कारोबार भएको छ भने निर्धन उत्थान बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र नविल बैंकको दुई करोडमाथिको कारोबार भएको छ । नेपाल लाइफ प्रोमोटर, सानिमा बैंक, प्राइम बैंक लगायतको एक करोडमाथिको कारोबार भएको छ ।
गुमाउने कम्पनीहरुको अग्रस्थानमा रहेको सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किमका सेयरधनीले ९.९९५९ प्रतिशतका दरले आफ्नो सम्पत्ति गुमाउँदा भार्गव विकास बैंक, सेन्ट्रल फाइनान्स, पूर्णिमा विकास बैंक र वल्र्ड मर्चेन्ट बैंकिङका सेयरधनीले क्रमशः ६.०७, ५.८२, ५.३४ र ५ प्रतिशतका दरले गुमाएका छन् । हिमालयन पावर पार्टनर, सिनर्जी पावर, मिसन डेभलपमेन्ट बैंक, सिन्धु विकास बैंक, महिला सहयात्रा माइक्रोफाइनान्स लगायतका सेयरधनीले पनि गुमाएका छन् ।
प्रकाशित मितिः२०७४ भदौ १५
तारा एअरले भित्र्यायो भाइकिङ ४०० श्रृङ्खलाको नयाँ जहाज
काठमाडौं । तारा एअर प्रालिले आफ्नो नयाँ ट्विनअटर वायुयान भित्र्याएको छ। सो विमान सेसेयल्स, माल्दिभ्स,
गण्डकी सरकारको निर्णयले नवलपुरबासी उत्साहीत
कावासोती । गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयले नवलपुरबासी उत्साहित भएका छन् । बुधबारको मन्त्रिपरिषदले
सानिमा बैंकले ल्यायो यस्तो प्रविधी, घरमै बसी कर्जा सिमा परिक्षण र आवेदन दिन सकिने
काठमाडौं । सानिमा बैंकले सानिमा अनलाइन कर्जा सिमा परीक्षण तथा कर्जा आवेदन दिने प्रविधि ल्याएको
विद्युत् पुगेपछि गाउँकै नाम ‘कुलमान घिसिङ चोक’
झापा । झापाको दुई नगरपालिकाको बीचमा अवस्थित एक गाउँको नाम ‘कुलमान घिसिङ चोक’ नामाकरण गरिएको
सानिमा बैंकले ल्यायो यस्तो प्रविधी, घरमै बसी कर्जा सिमा परिक्षण…
नेप्सेमा साँढे ६२ लाख कित्ता सेयर सूचिकृत
भूकम्प पिडितलाई खुशीको खबर : बनिसकेका घरको मापदण्ड नखोजी अनुदान…
सामुदायिक लघुवित्तका अध्यक्ष, सञ्चालक र सिइओ बैंकिङ कसूरमा पक्राउ, यस्ता…
भिटोफको अध्यक्षमामा दीपक दाहालको उम्मेदवारी
महेशपुर छोटी भन्सारबाट आठ करोड राजश्व संकलन
नवलपरासी । पश्चिम नवलपरासीको महेशपुर छोटी भन्सार कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा रु आठ करोड